Zimbabwe (ZWE) and Mozambique (MOZ) Trade | OEC - The Observatory of Economic Complexity
Zimbabwe (ZWE) and Mozambique (MOZ) Trade
Exports: $354M, Rnk 3 / 117
Top Product: $132M, Ferroalloys
Exports: $85.8M, Rnk 17 / 107
Top Product: $27.7M, Electricity
Economic Complexity (ECI): ECI -0.72, Rnk 117 / 157
GDP: $21.4B, CURRENT US$
GDP PC : $1,464, CURRENT US$
GDP PC GROWTH: 89.7%, CURRENT US$
dotComparative Advantage Zimbabwe - Mozambique
Zimbabwe-Mozambique: In 2019, Zimbabwe exported $354M to Mozambique. The main products that Zimbabwe exported to Mozambique are Ferroalloys ($132M), Raw Tobacco ($64.1M), and Chromium Ore ($24.2M). During the last 24 years the exports of Zimbabwe to Mozambique have increased at an annualized rate of 8.37%, from $51.5M in 1995 to $354M in 2019.
In 2019, Zimbabwe did not exported services to Mozambique.
Mozambique-Zimbabwe: In 2019, Mozambique exported $85.8M to Zimbabwe . The main products that Mozambique exported to Zimbabwe were Electricity ($27.7M), Refined Petroleum ($21.3M), and Petroleum Gas ($9.4M). During the last 24 years the exports of Mozambique to Zimbabwe have increased at an annualized rate of 13.2%, from $4.39M in 1995 to $85.8M in 2019.
In 2019, Mozambique did not exported services to Zimbabwe.
Comparison: In 2019, Zimbabwe ranked 117 in the Economic Complexity Index (ECI -0.72), and 125 in total exports ($4.05B). That same year, Mozambique ranked 140 in the Economic Complexity Index (ECI -1.18), and 111 in total exports ($5.66B).
In 2019, Zimbabwe exported $354M to Mozambique. The main products exported from Zimbabwe to Mozambique were Ferroalloys ($132M), Raw Tobacco ($64.1M), and Chromium Ore ($24.2M). During the last 24 years the exports of Zimbabwe to Mozambique have increased at an annualized rate of 8.37%, from $51.5M in 1995 to $354M in 2019.
In 2019, Mozambique exported $85.8M to Zimbabwe. The main products exported from Mozambique to Zimbabwe were Electricity ($27.7M), Refined Petroleum ($21.3M), and Petroleum Gas ($9.4M). During the last 24 years the exports of Mozambique to Zimbabwe have increased at an annualized rate of 13.2%, from $4.39M in 1995 to $85.8M in 2019.
Top Destination: United Arab Emirates, $1.63B
This map shows whether countries import more from Zimbabwe or Mozambique. Each country is colored based on the difference in imports they receive from Zimbabwe and Mozambique or the difference in the growth in imports.
In 2019, countries that imported more from Zimbabwe than Mozambique were United Arab Emirates ($1.63B), Botswana ($62.6M), and United Kingdom ($84.9M).
In 2019, countries that imported more from Mozambique than Zimbabwe were India ($733M), China ($652M), and Italy ($399M).
Comparative Advantage Zimbabwe - Mozambique
This chart compares trade between Zimbabwe and Mozambique by product, considering products traded by both, Zimbabwe and Mozambique.
During 2019, Zimbabwe had a large net trade with Mozambique in the exports of Metals ($135M), Foodstuffs ($111M), and Mineral Products ($52.3M).
During 2019, Mozambique had a large net trade with Zimbabwe in the exports of Mineral Products ($59.5M), Chemical Products ($12.1M), and Metals ($3.58M).
This section shows import tariffs for products traded between Zimbabwe and Mozambique (using the HS6 product classification and the last year reported).
In 2016, the products from Zimbabwe that paid the highest import tariffs to enter Mozambique were Worn clothing and other worn articles (25%) and Petroleum spirit for motor vehicles (15%).
In 2018, the products from Mozambique that paid the highest import tariffs to enter Zimbabwe were Military weapons: artillery weapons (e.g. guns, howitzers, and mortars) (20%) and Military weapons: rocket launchers, flame-throwers, grenade launchers, torpedo tubes and similar projectors (20%).
*The tariffs present between Zimbabwe and Mozambique are:
This visualization show the product space at the HS4 level colored from blue to red. This mean that the more blue a dot/product is, the more Zimbabwe has comparative advantage over Mozambique. Similarly, the more red a dot/product is, the more Mozambique has comparative advantage over Zimbabwe.